ရတနာပုံနေပြည်တော် websit သုံးစွဲသူများကြောင့် သံတွဲအင်တာနက်ဆိုင်များကိုပိတ်ပေးရန်တောင်းဆို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရတနာပုံနေပြည်တော် websit သုံးစွဲသူများကြောင့် သံတွဲအင်တာနက်ဆိုင်များကိုပိတ်ပေးရန်တောင်းဆို
ရတနာပုံနေပြည်တော် websit သုံးစွဲသူများကြောင့် သံတွဲအင်တာနက်ဆိုင်များကိုပိတ်ပေးရန်တောင်းဆို
Posted by Aoewaimaungkoyu on Nov 25, 2011 in Copy/Paste | 33 comments
ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာခေါ် မန္တလေးဂေဇက်သတင်း web sit တွင် သံတွဲမြို့၏ အာဏာပိုင်အချို့နှင့် အကျင့်ပျက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး၏ဥပဒေမဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုများ အကျင့်ပျက်လာဘ်စားမှုများ မကြာခဏပါရှိလာမှုအပေါ် ဥက္ကဋ္ဌများရှင်ဟု လူသိများသောအဆို့ါလုပ်ငန်းရှင်မှ သံတွဲအင်တာနက်ဆိုင်များ ပိတ်သိမ်းပေးပါရန် ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြိးများရှေ့မှောက်တွင် အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်စား အခုလ ၂၂ ရက်နေ့က တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိသည်၊
အဆိုပါသတင်းနှင့်ပတ်သက်၍သံတွဲမြို့ခံတစ်ဦးအားဆက်သွယ်မေးမြန်းသောအခါ “မန္တလေးဂေဇက်က ပြည်သူတွေရဲ့မိတ်ဆွေပါ လူငယ်အများစုက လ္ဘက်ရည်ဆိုင်မှာလဲ မန်းဂေဇက်သတင်းအကြောင်းတွေပြောကြတာ ဦးလေးကအင်တာနက်မသုံးတတ်ဘူး ဖတ်ရှင်ရင်အသုံးပြုတတ်တဲ့သူခေါ်သွားပြီးဖတ်တယ် ဒါကပြည်သူ့အသံစစ်တယ်ပြည်သူတွေမတရားခံနေရတာကို အစိုးရမင်းတွေသိအောင်တင်ပြပေးနေသလိုဘဲ သတင်းရေးပေးတဲ့သူတွေကိုလဲ ခွေးကိုက်ခံရခြင်းမှကင်းဝေးအောင်အမြဲမေတ္တာပို့တယ်”ဟုပြောဆိုပြီး လူငယ်ကျောင်းသားတစ်ဦးကမှု “သားတို့က g talk ,net game ကစားတာများတယ် မန်းဂေဇက်ကြ ပုံမှန်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ် လူတွေကိုအကျိုးပြုတယ်လို့ထင်ပါတယ် ကောင်းတာလေးတွေဆိုယူပေါ့” ဟုပြောဆိုပါသည်၊ အခြားလူလတ်ပိုင်းတစ်ဦးကမှု”တလောက wi fi တွေကို အာဏာပိုင်အမိန့်နဲ့ပိတ်တယ် အခုအင်တာနက်ဆိုင်ကိုပိတ်ခိုင်းပြန်ပြီ ပိတ်ရင် ပြဿနာပိုကြီးလာနိုင်တယ် ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းကို အာဏာပိုင်က ကာပေးထားပြီး ပြည်သူကို ရန်လုပ်လာရင် သူတို့ဘဲအထိနာမှာပေါ့ အင်တာနက်အကျိုးကြောင့် သံတွဲမှာ အကျင့်ပြက်ဝန်ထမ်းတွေတော်တော်ပြုန်းသွားတယ် နောက်လူတွေလဲ မလှုပ်ရဲဘူး ပြည်သူတွေဘက်ကရပ်တည်သလိုဖြစ်တဲ့အတွက် မန်းဂေဇက် ကိုရော အင်တာနက်တီထွင်သူတွေကိုပါ ကျေးဇူးတင်တယ် အုပ်ချုပ်သူကမျှတရင် တရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်ရင် ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး အခုအင် တာနက်ဆိုင်ကိုပိတ်ခိုင်းတဲ့အကောင် မထသဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့အကောင်လေ ဒီကောင်ဟာ အစိုးရကို နာမယ်ပျက်အောင်လုပ်နေတဲ့ကောင်ပေါ့ အမှုထမ်းတွေလဲဒီကောင်နဲ့ပေါင်းရင် ဂျောက်ကြပြီမှတ် လူရှုပ်တကောင်ပါ” ဟုပြောဆိုဖြေကြားသွားပါသည်၊
ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာခေါ် mandalay gazette ဟူသည့်အမည်သည် ၁၂၃၆ ခုနှစ်တွင် မင်းတုန်းမင်းတရားကြီး တည်ထောင်ခဲ့သည့် ဘုရင့်သတင်းစာ၏ အမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာတို့၏ ပထမဆုံးသောသတင်းစာဖြစ်သည်၊
အဆိုပါသတင်းစာ၏ မူဝါဒတွင် မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးက “ငါဘုရင်မကောင်းလျှင် မကောင်းသလိုငါ့ကိုရေး မိဖုရားတွေမကောင်းလျှင် မိဖုရားတွေကိုရေးသားတော်သမီးတော် မင်းညီမင်းသားတွေနည်းလမ်းမကြလျှင် မကြသလိုရေး လွှတ်တော်တရားသူကြီးတွေ လွဲမှားလျှင် လွဲမှားသလိုရေး မြို့ဝန်မင်းတွေ မတရားလျှင်မတရားသလိုရေး မင်းတို့သတင်းစာ ဘာအပြစ်မှမရှိစေရ နန်းတွင်းကိုသတင်းစာတိုက်ကလူတွေဝင်စေထွက်စေ အတားအဆီးမရှိစေရ” ဟူ၍မ်ိန့်မှတ်ခဲ့ပါသည်၊
ပြည်ထောင်စုအစိုးရသည် သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းများအားတိုင်းပြည်၏စထုတ္ထမဏ္ဍိုင်အဖြစ်နိုင်ငံတကာ ဒီမိုကရေစီစံနှင့်အညီသတ်မှတ်ခံယူထားကာ မြန်မာပြည်အား”good government clean government “မူဝါဒဖြင့် ဒီမိုကရေစီရေးသို့ ဦးတည်ပြောင်းလဲနေသော်လည်းသတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်တွင် သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်ခေတ်စနစ်မှ သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်ကို လိုက်မမီနိုင်သေးဘဲ အာဏာရှင်လက်ကြွင်းလက်ကျန်များနှင့်သံတွဲမထသဥက္ကဋ္ဌကဲ့သို့ မတရားဥပဒေမဲ့ရမ်းကားမှုများနှင့် လူအခွင့်အရေးချိုးဖျက်မှုများကို အမြန်ဆုံးထိထိရောက် စီစစ်ပြီး “governance “ကို အမြန်ဆုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲသင့်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြည်သူပြည်သားများက သုံးသပ်နေကြသည်၊
ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ ဒီလိုအကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းများကို အမြန်ဖော်ထုတ်ပေးရမှာပါ..။ သံတွဲက အင်တာနက်ဆိုင်တွေ တကယ်ပိတ်ရင်ပြောပါအုံးဗျို့.။အင်တာနက်လိုင်း ရတဲ့နေရာက ပို့ကြတာပေါ့..။ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ပေးကြပါ။ သတင်းတိုင်းကို ကိုယ့်ဘက်ကတော့ မှန်ကန်တိကျ သေချာဖို့တော့ လိုပါတယ်။ အားပေးပါတယ်ဗျာ..။
ဟုတ်ရင် ပြည်တွင်းဂျာနယ်များ၊ ပြည်ပရောက် မြန်မာသတင်းဌာနများ သိကြမှာပါ။ သူတို့ ဘာမှမပြောဘဲနဲ့တော့ ပြောရန်ခက်တယ်။ အဲဒီသတင်း မြို့အပြင်ရောက်သွားအောင် အရင်လုပ်လိုက်ပါလား။ ဒါမှ ရွာသူားများ ဝေဖန်ချက်ပေးလို့ ရမှာပေါ့။
ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်စပ်နည်းပညာဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ(၃၀)အရ Public Access Centre (PAC)လိုင်စင်ချထားပေးထားပြီးသား
နှင့် အစိုးကိုယ်၌က ဝေဖန်ခံနိုင်သော ပြည်သူ့ အစိုးရဟု ကတိပြုထားချိန်မှာ ခုလိုပိတ်ခိုင်းတယ်၊ပိတ်ခိုင်းမယ် အကြံပြုတောင်းဆိုတယ်။
လက်ခံတဲ့ပြည်နယ်အဆင့်ဝန်ကြီးက လဲလက်ခံတယ်။ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးသိန်းထွန်းတောင် မစဉ်းစား၊မပြောဝံ့တဲ့ စကားမျိုးပြောတယ်။
ဘာမဟုတ်တဲ့ ဖြုတ်ဥာဏ်နဲ့ စဉ်းစားမနေပါနဲ့ ။မျက်တောင်မွှေးတဆုံးမကြည့်ဘဲနဲ့ မျက်စိတဆုံးကြည့်လိုက်ပါဗျာ။
ဟရောင်ဒွေ မပျောင်နဲ့ မပျောင်နဲ့
အရဂါး ဒဂျီးအိပ်နေယို့ ကြိုကန်ထားပေးဒါ
မိုက်ကယ်ဂျော်နီကြီး ဘယ်သူ့ ကိုပြောနေ၊ထိန်းနေတာလဲ။ကိုသားကြီးလဲ စိတ်မနိုင်တော့ဘဲ ပေါက်ကွဲနေပါလား။
အဲဒီလို လုပ်လို့ ရတယ် တဲ့လား
မသိလို့ ပါ ဆိုပြီး မေးကြည့်ကြပါဦး
မှန်မယ်ဗျ။စူးရောက်တွေလား၊ဘာလားတော့မသိပါဘူး. အင်တာနက်ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပညာရှင်တွေ
ဟေ့ ဟေ့ … မင်းတို့ဘာသာ ပိတ်ချင်တာပိတ် .. ဖွင့်ချင်တာဖွင့် .. .ဘယ့်နှယ့် ဂေဇက်ကို လာပြီး ခလုတ်တိုက်နေရတုန်းကွ … ။ ဘယ်သူကမှ ဒီမှာရေးပါလို့ … အတင်း မတိုက်တွန်းသလို … ။ ဒီမှာရေးလို့ ခင်ဗျားတို့ အင်တာနက်သုံးမရပါစေနဲ့လို့လည်း ဘယ်သူမှ ဆုမတောင်းဘူး … ။
ငြင်းခုန်ချင်လျှင် ကိုယ်ပိုင် ဖရီးဆိုက်ထောင်လို့ရပါတယ် .. .သီးသန့်ထောင်ပြီးငြင်းခုန်ကြပါ … ။ ဘာမှ မလုပ်ပဲ ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ ငါတို့ရွာလေးကိုတော့ … သိပ်မမွှေကြပါနဲ့ … ။ တော်ကြာ … ဘာမှ မဆိုင်ပဲ အဘမ်းခံနေရဦးမယ် … ။ တိုင်သိပ်မပတ်နဲ့ …….. အေးဆေးနေကြကွာ … ။ :mad:
သဂျီးလည်း … ဒီတိုင်း မထားပဲ …. အက်ရှင်တစ်ခုခုယူဖို့ စဉ်းစားပါဦး ။
တို့ အမ ကို ရဲရဲတောက် ဖြစ်အောင်ဘယ်သူ လုပ်တာလဲကွ။ ဒီမှာလာအော်နေလို့မထူးဘူး။ မင်းတို့ ကြောင့် မန်းဂေဇက်ကို အဘမ်းမခံ နိုင်ဘူး။
စီနီယာ ဆိုတော့ . . ပြောပေါ့. . ရပါတယ်. .
မမ etone ရဲ့ ရန်ဖြစ်တဲ့ post က ပိုပြီး ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်..
ရန်ဖြစ်တာတွေ မဖြစ်တာတွေ ၊ စီနီယာတွေ ဂျူနီယာတွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူး ။
လွန်လွန်ကဲကဲ ခဏခဏပွဲဆူလာလွန်းလို့ … ။ နင်တို့ဘာသာ ဆူချင်တာ ဆူ ပြသနာမရှိဘူး … ။ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ အကောင်တွေက ဂေဇက်ပါ ဘမ်းလျှင် နင်တို့တင်မကဘူး ငါတို့ပါ သုံးဖို့ခက်သွားမယ် … ။
အဲဒီသံတွဲသားတွေကိစ္စက.. ဘယ်လိုမှ နားမလည်နိုင်ဘူး..။
PM တွေလည်း ပို့ထားတာ ပလူပျံနေလို့.. ဘယ်သူမှား.. ဘယ်သူမှန်သလည်း မသိ…
သံတွဲကတင်တဲ့.. ပို့စ်လည်း ဖတ်တာ.. ဘာမှနားမလည်တော့.. ဖတ်ကိုမဖတ်တော့ဘူး..။
ကျုပ်က..ကြားထဲက.. ဘာကိုဘယ်လို.. တာဝန်ယူဖြေရှင်းရမလည်း မသိ..။
လွတ်လပ်စွာ ပေးတင်ထားတာကို.. လွတ်လပ်စွာချကြ..နှက်ကြ.. ပစ်စာပို့ကြ..တိုင်ကြ.. အရေးယူကြနဲ့.. ဟုတ်နေတော့တာပဲ..။
တကယ်လို့.. သံတွဲမြို့က… လူထုတွေထိခိုက်စေကုန်တယ်ဆိုရင်တော့…
အင်တာနက်ကဖေးတွေ.. ၀ိုင်ဖိုင်တွေ ပိတ်တာဘာညာလုပ်မနေပါနဲ့.. ကျုပ်ဆီ.. အာဏာပိုင်တွေ.. အီးမေးလ်စာတိုက်ရိုက်ပို့လိုက်ပါလို့..။
သံတွဲ IP Address ကို..Block လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်လို့..။
သဂျီးကလည်း လာနောက်နေပြန်ပြီ … ရေးနေတဲ့ အိုင်ပီတွေ သဂျီးသိနေတာပဲ … တကယ်သာ နားအေးချင်လျှင်ပြောပါတယ် … ။
အေးလေ သူမသိတာ ကျနေတာပဲ။ ပိတ်စရာ ရှိတာ ပိတ်တာ မဟုတ်ဘူး။
.htaccess နဲ့ တမြို့လုံးဘန်းလိုက်ပါပြီ..။
ကျော်ခွလာသူတွေလည်း.. တိုင်စာ..ပစ်စာ မတင်ကြပါနဲ့လို့..။
တင်ရင်.. တဦးချင်းစီကို.. ဘန်းပါမယ်လို့.. ကိုရင်စည်သူပဲ.. ရွာစော်ကြီးလုပ်ပေးလိုက်ပါနော..။
ဝေးဟေးဟေး သဂျီးကွ …
တကောင်တက် ..တကောင် စနိုက်ဘာနဲ့ထု
အကောင်များရင် တပ်မ၇၇ မှာ လက်နှက်ကြီးငှားပေးမယ်
ကိုရင်စည်သူဆိုလို့ … ရွာထဲက အသက်ငယ်ငယ်ကိုရင်လေးပြေးထွက်လာဦးမယ် .. နာမည်က တူနေတော့
အားပါးပါး.စ်… အတုန်လေး ရဲရဲတောက်နေပါလားကွယ်ရို့..
ကိုအင်ဂျီးလာဘီ ဘာမှ အားမငယ်နဲ့ ….
ဟိတ်လူတွေ ခင်ညားတို့ ဟာခညားတို့ ဖရီးဒိုမိန်း တခုခု ဖွင့်ပီး
ဒါမှမဟုတ် ဘလော့ဖွင့်ပီး ချကြပါလားဂျာ …
ဒါမှမဟုတ်လည်း ချိန်းရိုက်ကြပါလား …
သကြီးရ သံတွဲသတင်းတင်ရင် ဘန်းမယ်လို့ သာလုပ်ချလိုက်လေ အေးတာပဲ။ အတိုင်အတော ကိုထူတာ။
ချိန်းရိုက်မယ် ဟုတ်လား? ရိုက်ရဲလိမ့်မယ် ကောင်းကောင်းကြီး တစ်ဖက်ကလဲ ရဲကို အရက်တိုက်ခေါ်ပြီး အစောင့်ချထားတာ။ တစ်ဖက်ကလဲ ကြောက်တတ်လိုက်တာ မှ တုန်နေတာပဲ လေနဲ့ ထိုးလိုက်ကြ ကြိတ်လိုက်ကြနဲ့ လေနဲ့ ဆိုရင် ရွှေဒူဝံ အရှုံး ပေးရမယ်။ တစ်ကယ်လဲ တွေ့ ကြရော ဝါတော် ရှစ်ဆယ် ဆရာတော်ကြီးတွေလို မျက်လွှာလေးတွေ ချလို့။ ဟက်ဟက် ရယ်ချင်ရဲ့ ပက်ကြိ
သူကြီးပစ်တဲ့ လက်နက်ကြီး အစအနတွေ တို့ကိုပါထိတယ်ဟေ့
စနိုက်ပါလေး ဘာလေးနဲ့ ပစ်ကြပါဟ ..
လက်နက်ကြီးနဲ့ ထုတော့ အကုန်ထိကုန်ပြီ ..
သူကြီးရေ … တစ်ကောင်ချင်း ပစ်ပါဗျ …
သကြီးပိတ်ဖို့ IP လိပ်စာ
အမြန်ဆုံး ပိတ်ပေးရင် ကျေးဇူးတင်နေမယ်သကြီး။ ဒီမှာလဲ ကျော်နဲ့ မောင် အရှုပ်တော်ပုံကြီး ကြောင့် ဘယ်သူမှ စိတ်ချမ်းသာ ကိုချမ်းသာ မနေရဘူး။ ဒီတော့ ပိတ်မယ်ဆိုလဲ မြန်မြန်ပိတ်ဗျာ
61.4.64.12 ကကျွန်တော်တို့ သုံးနေကြရတဲ့ IP ပဲ မြန်မြန်ပိတ်နိုင်လေးကောင်းလေပဲ။
ကျုပ်ကတော့ တစ်ကယ် စစ်မှန်တဲ့ လာဘ်စားမှု့တွေဆိုရင်တော့
တင်ပြကြစေခြင်တယ် ဒါမှကောင်းတယ် တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့
ဘာမှ သက်သေအထောက်အထားမရှိဘဲနဲ့ ဗလိုင်းထီးဆိုင်ကြီးဆိုရင်တော့
တစ်ခုရှိတာက သာကီတွေနော အမှန်တရားကို တင်ပြကြတာလား
မစားရလို့ သဲနဲ့ပက်တာလား အင်ဒလင်းထည့်တာလား ဆိုတာကတော့
သံတွဲကို ဘန်းတာလဲ ဘန်းပေါ့ သဂျီးရေ
မှော်ဆရာ ရဲ့ မြို့ က ကြားက အဆစ်ပါသွားတယ် ဆိုကလား ဘဲ
ကူညီမစ ပါဦး သဂျီးရေ
ဟုတ်ပါ့ သဂျော်ဒဂီး ရေ
(သူနဲ့ ချက်နေလို့ အကျင့်ပါတွားလို့ ကန်တော့နော် သဂျီး…)
မှော်ဆြာပြောတော့ အဲဒါ စကိုင်းနက် အိုင်ပီဆို။ စကိုင်းနက်နဲ့ သုံးတဲ့သူတွေ အားလုံး MG ဝင်လို့ မရတော့ဘူးဆို။ အဲဒါ ဟုတ်လား။
ဘယ်သူတွေကဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်ပီလဲအမ etone ကလဲဒေါတွေပွနေပါလား
လူမိုက် အဌားလိုက်သည် (ဟိဟိ) ပစ်ရင်ပြေးမည်
သြော် အမှန်တရားဆိုတာ ကိုယ်ကျိုးကြည့်ပြီးမှ လက်ခံကြတာလား ဒီလိုဆိုပြည်သူအတွက် ရေးတဲ့သတင်းမှန်တွေက နေရာမရသေးဘူးပေါ့ ကျွန်တော်မသိလို့ရိုးသားစွာမေးပါရစေ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆို ဘယ်သီးခြားကမ္ဘာက သက်ရှိတွေလက်ခံထားတဲ့အရာလဲဟင် အဏာရှိသူတွေက အာဏာကိုအားကိုးပြီး ပြည်သူကိုညှင်းဆဲနေတဲ့ သတင်းမှန်တွေတင်ပြခွင့်ရှိတဲ့ သတင်းဝဘ်ဆိုဒ်လေးရှိရင်လမ်းညွှန်ပေးပါဦး
အဲ့လိုဒေါ့လည်း မဟုတ်တေးဝူးရားရို့ ………….
တခုခုဒေါ့လွဲနေဘီ ထင်ဒယ် (အထင်) ဘပုစကား ;)